Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguTim & Carrie
Uhlaziyo lweCoronavirus (Covid-19)! Sikuthatha nzulu oku, kwaye sithatha amanyathelo ongezelelweyo ekucoceni. Qiniseka xa uhlala apha, yonke indawo, umqheba, iqhoshana, iphedi yezitshixo iya kubulawa iintsholongwane ngaphambi kokuhlala kwakho. Hlala ngaphakathi kwaye wonwabele umbono owenziwe ngamaplanga okanye uthathe imizuzu eli-10 emfutshane yokuqhuba ukuya eWrightsville Beach okanye kwiDowntown yeMbali. I-Airbnb yabucala yindawo evulekileyo enkulu neqaqambileyo enegumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, ikhitshi eligcweleyo, ibhafu eshushu yabucala kunye neyadi ebiyelweyo.
I-Zen 2 Getaway e-Woods likhaya eliye lahlulwe laziiyunithi ezimbini ezahlulwe ngokupheleleyo/zabucala. Uya kufumana ukuphumla kobusuku obuhle kumandlalo amnandi kakumkanikazi.
Zenze usekhaya ngexesha lokuhlala kwakho, njengoko ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji, isitovu, i-oveni, imicrowave, itoaster, kunye nomenzi wekofu. I-WiFi enesantya esiphezulu iyafumaneka ukuze usebenze okanye uzinkcenkceshe ngeNetflix, kunye nomabonwakude onezitishi ezininzi ngeSpectrum. Qinisekisa ukuba uphumle ngaphandle kwindawo ebiyelwe yabucala eyadi kwaye uthathe i-tub yakho yabucala eshushu ngaphambi kokuba uzinze ngokuhlwa.
Ngelixa le Airbnb ilikhaya elahlulwe kubini, indawo yakho ibucala ngokupheleleyo inomnyango owahlukileyo. Ibhafu eshushu AYI kwabelwana ngayo - yeyakho yonke. Nguwe kuphela onokufikelela kuyo.
4.86 · Izimvo eziyi-303
IZen 2 Getaway in the Woods ibekwe kwindawo ezolileyo nenoxolo. Ukuba ukukhwaza nokuphambana yinto yakho, ngokuqinisekileyo ayisiyiyo indawo yakho le.
Umbuki zindwendwe ngu- Tim & Carrie
Izimvo eziyi-2 893
Sisoloko sifumaneka ngo-Airbnb okanye ngesms/umnxeba ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna nantoni na.
UTim & Carrie yi-Superhost